महत्त्वाकांक्षी फूल : ख़लील जिब्रान | Ratopati
‘त्यो आत्मसन्तोष नै मेरो अस्तित्व र जीवनको प्रगतिको सबभन्दा ठूलो तगारो थियो: त्यसले नै मलाई दुर्बल, अल्छी, मुक र कुपमंडुक बनाएको थियो ’
personटंक कार्की exploreकाठमाडौं access_timeचैत १३, २०७६ chat_bubble_outline0
खलिल जिब्रान पढेर मैले खुब सिकेको छु, खुब मजा लिएको छु । यथार्थ र कल्पनामा असम्भव जस्तो लाग्ने सेतु हाल्छन् उनी। त्यो सेतु तरिसकेपछि तपाईं यसरी आल्हादित हुनुहुन्छ कि मानौं भरखरै तपाईं कुनै अलौकिक दुनियाँ विचरण गरेर आउनु भएको छ । त्यतिमात्रै कहाँ रु१ अब तपाईंका कदम फरक पर्ने छन् । उनी तपाईंलाई एकांकी, होसल्याङ्गे हुनै दिन्नन् । तपाईं दिक्दार हुनुहुन्छ भन्ने उनी मुरली बजाउदै आइपुग्छन् । होइन कतै रनभुल्लमा हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर पनि उनी दिक्दर्शक बन्न हाजिर हुन्छन् । पैगम्वर होइनन् उनी तर पैगम्वरको नालीबेली उतार्छन् । चिन्तनको गगनमा उनी तपाईंलाई वायुपंखी घोडामा राखेर शयर गराउँछन् ।
पोथ्रा जस्तोमा फुलेको एक सानो सुगन्धित निलो फूल थियो । अन्य फ़ूलहरुसंग विनम्रतापूर्वक सहअस्तित्वमा रहेर प्रशान्त चित्तले लहराउथ्यो ।
एकदिन प्रातः काल थियो । शीतका थोपा उसका पत्रमा सुशोभित भएर विराजमान थिए । उसले आफ्नो शिर ठाडो गर्‍यो र यता ता हेर्‍यो । उसले देख्यो कि छेवैमा एक सुन्दर गुलाबको फूल गर्वले शिर उठाएर बडो शानले खडा छ । यस्तो प्रतित हुन्थ्यो ऊ मानौं आकाशमा एक हरियो रंगको जल्दो बल्दो हिराको मशाल हो ।
यो देखेर यस सानो फूलले आफ्ना ओंठ फट्फटाउन थाल्यो । ऊ भन्न थाल्यो, 'यी सबमा मेरै मात्र फुटेको भाग्य । यिनका छेउमा म त भुसुनो जति पनि भइनँ । प्रकृतिले मलाई यति हीन र गरिव किन बनाइन् ?! मैले पृथ्वी मै लेप्सिइरहनु पर्दछ । म त आफ्नो शिर निल गगनतर्फ उठाउन पनि सक्दिनँ । न त म गुलाबको जस्तो आफ्नो अनुहार सूर्यतर्फ नै मोड्न सक्छु ।
गुलाबले हाँस्दै भन्यो, 'तिम्रो कुरा कस्तो विचित्र ! तिमी त सौभाग्यशाली छौं । तर तिम्रो कमजोरी भनेको तिमी आफ्नो सौभाग्य महसुस गर्न सक्दैनौ । प्रकृतिले सुगन्ध र सौभाग्य दिएको हुन्छ । यस्तो कमैलाई प्राप्त हुन्छ । तिमीले त्यस्तो क्षुद्र विचार राख्नु हुँदैन । जे प्राप्त छ त्यसमा सन्तोष गर्न सिक ।
गुलाबको फूलले त्यस सानो फूलको गुनासो सुन्यो । गुलाबले हाँस्दै भन्यो, 'तिम्रो कुरा कस्तो विचित्र ! तिमी त सौभाग्यशाली छौं । तर तिम्रो कमजोरी भनेको तिमी आफ्नो सौभाग्य महसुस गर्न सक्दैनौ । प्रकृतिले सुगन्ध र सौभाग्य दिएको हुन्छ । यस्तो कमैलाई प्राप्त हुन्छ । तिमीले त्यस्तो क्षुद्र विचार राख्नु हुँदैन । जे प्राप्त छ त्यसमा सन्तोष गर्न सिक । ख्याल राख, जो सानो भएर रहेको छ ऊ नै माथि उठ्न सक्दछ । जो आफूलाई ठालु भएको ढोंग गर्दछ या ठूलो भएको भन्ने घमण्ड गर्दछ त्यो चाँडै नै समाप्त हुन्छ ।’
सानो फूलले भन्यो, 'तिमी मलाई यस कारणले सान्त्वना दिरहेका छौ कि मैले चाहेको जति तिम्रो साथमा सवै चीज छ । आफु ठूलो छु भनेर तिमी मलाई धमास दिरहेका छौ । आह, एउटा भाग्यमानको नसिहत अर्को अभागीको निम्ति कत्रो कष्टदायक हुन्छ ।'
प्रकृतिले पनि निलो फूल र गुलाबको फूलको यावत वार्तालाप सुनिन् । उनी प्रकट भएर भनिन्, 'मेरो भाइ सानो फूल, तिमीलाई यो के भा'को ?! तिमि त आफ्नो विचार र कार्यमा सदा नम्र र विनयशील थियौ । के तिम्रो हृदयमा लोभ र लालचले वास गरेको हो ?! त्यसले तिम्रो बुद्धिमा बिर्को लगाएको हो ?!'
तब निलो फूलले गिडगिडाउदै भन्यो, 'वात्सल्यपूर्ण, करुणामयी माते ! मेरो विनम्र प्रार्थना छ कि मलाई एकै दिनको निम्ति भए पनि गुलाब बन्ने अवसर दिनुहोस् ।' प्रकृतिले प्रत्युत्तरमा भनिन्, ' तिमी के मागिरहेका छौ त्यसको भेउ तिमीलाई थाहा छैन । यस अन्धो लालसाको पछिल्तिर लुकेको विपत्ति बारे तिमी अनभिज्ञ छौ । तिमी केही गरी गुलाब बनिहाल्यौ भने पनि स्वयम् अफसोस मान्ने वाला छौ । तिमीलाई पश्चातापबाहेक केही मिल्नेवाला छैन ।'
निलो फूलले जिद्दी गर्‍यो, 'मलाई पनि एउटा अग्लो गुलाब बनाइदिनुहोस् । त्यसो भयो भने म पनि सगर्व आफ्नो शिर ठाडो गर्न चाहन्छु ।' तब प्रकृतिले आजित भएर भनिन्, 'उसो भए, ए अज्ञानी विद्रोही सानो फूल म तिमीलाई वरदान दिने भएँ । तर पछि तिमीले मलाई गुनासो गर्न भने पाउने छैनौ नि !'
प्रकृतिले आफ्नो रहस्यपूर्ण जादुको औंला उठाउदै निलो फूलको जरामा स्पर्श गरिन् । तुरुन्तै ऊ एक ठूलो गुलाबको फूलमा परिणत भयो । उ बगैंचाका अन्य फूलहरु भन्दा पनि ठूलो भयो ।
अचानक आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्यो । हावाले क्रुद्ध आँधीको रुप लियो । वायुमंडलको शान्ति छताछुल्ल भयो । आँधीले धर्तीमा झन्डै टाँसिएका अवस्थामा रहेका स-साना बोट बिरुवा बाहेक अरु सबै बोटबिरुवाहरुलाई उत्तानो टाङ्ग बनाइदियो । हाँगाबिंगा सब भाँचभुच पार्‍यो । अग्ला अग्ला फूलहरु कच्याक कुचुक पार्‍यो । त्यस आँधीले बगैंचा तहसनहस नै पार्‍यो ।
बोट बिरुवाको यो हालत देखेर निलो फूल मध्येको एउटाले भन्यो, 'हेर त, आँधीले अभिमानी फूलको क्या दुर्दशा बनाइदियो ।'
अर्को फूलले भन्यो, 'हामी साना छौं र पृथ्वीको समिपमा छौं तर हामी दैवी क्रोधबाट सुरक्षित पनि छौं ।'
तेश्रोले भन्यो, 'आँधीले हामीलाई हायलकायल पार्न सकेन । किनकि हाम्रो कद सानो छ ।'
यहीं बेला निला फ़ूलकी रानीले आफ्नो बगलमा तहस नहस भएको उस अग्लो निलो फूललाई देखेर भनिन्, ' हेर त साथिसंगी हो ! लालचले त्यस सानो निलो फूलको क्या हालत बनाइदियो ?! उ केवल एक घण्टाको निम्ति अभिमानी ठूलो फूल बन्न सक्यो । यस दृश्यलाई आफ्नो अहोभाग्यको निम्ति सदा स्मरणमा राखी राख्नु !'
यो सब सुनेर त्यो मृतप्राय ठुलो फ़ूलमा होश आयो र आफ्नो बचेखुचेको शक्ति सम्हालेर शान्त भावले प्रतिक्रिया दिन थाल्यो, ' तिमीहरु सबका सब आत्मसन्तुष्ट र निराहंकारी मुर्ख हौ । मलाई कदापि आँधदेखि डर लागेन । हिजोसम्म त म पनि सन्तोषी थिएँ । आफ्नो जीवनदेखि सन्तुष्ट थिएँ । तर त्यो आत्मसन्तोष नै मेरो अस्तित्व र जीवनको प्रगतिको सबभन्दा ठूलो तगारो थियो । त्यसले नै मलाई दुर्बल, अल्छी, मुक र कुपमंडुक बनाएको थियो । डरका मारे म पनि पृथ्वीमा लेपासिएर तिमीहरु जस्तै जीवन गुजार्न सक्ने थिएँ । म पनि तिमीहरु जस्तै शीतको प्रतीक्षा गरेर मलाई पनि हिउँले कफनमा बन्द गरेको टुलुटुलु हेर्न र मृत्युको समक्ष आत्मसमर्पण गर्न विवश हुन सक्ने थिएँ । तर मैले त्यसो गरिनँ । म अब प्रसन्न छु । किनभने मैले आफ्नो हीन दुनियाँबाट बाहिर निस्केर विश्वको रहस्यलाई बुझेको छु । यो यस्तो कार्य हो जसको तिमीहरुलाई छेउ टुप्पै थाहा छैन ।'
'म आफ्नो मनमा आएको लालचको उपेक्षा गर्ने सक्ने थिएँ । परन्तु मैले रात्रिको निस्तब्धतामा लौकिक र परालौकिक तत्त्वले आपसमा भलाकुसारी गरेको सुनें । ती त कुरा गर्दै थिए कि सत्ताभन्दा परको आकांक्षा नै हाम्रो अस्तित्वको प्रमुख लक्ष हो । त्यै बेला मेरो आत्माले विद्रोह गर्‍यो । मेरो हृदयमा आफ्नो सीमित सत्ताभन्दा माथिको स्थान प्राप्त गर्ने लालसा उत्पन्न भयो । मैले अनुभव गरे कि ताराको गीत धर्तीले सुन्न सक्दैन । तब नै मैले आफ्नो हीनताको विरुद्ध धावा बोलें । मैले आफ्नो न भए पनि त्यो गीत सुन्न चाहें । हुँदा हुँदा केसम्म भयो भने मेरो विद्रोही भावना एक शक्तिमा परिणत भयो, मेरो लालसाले मेरो आकांक्षाको रुप लियो । प्रकृति त हाम्रा गम्भीर स्वप्नको प्रधान विषय हुन् र तिनले हाम्रा इच्छापूर्ति गरी दिन्छिन् । मेरो प्रार्थना तिनले सुनिन् र नै आफ्ना जादुकाका औंलाले मेरा जरा स्पर्श गरेर मलाई एक ठूलो फूलमा परिणत गराई दिइन् ।'
मेरो हृदयमा आफ्नो सीमित सत्ताभन्दा माथिको स्थान प्राप्त गर्ने लालसा उत्पन्न भयो । मैले अनुभव गरे कि ताराको गीत धर्तीले सुन्न सक्दैन । तब नै मैले आफ्नो हीनताको विरुद्ध धावा बोलें । मैले आफ्नो न भए पनि त्यो गीत सुन्न चाहें । हुँदा हुँदा केसम्म भयो भने मेरो विद्रोही भावना एक शक्तिमा परिणत भयो, मेरो लालसाले मेरो आकांक्षाको रुप लियो । प्रकृति त हाम्रा गम्भीर स्वप्नको प्रधान विषय हुन् र तिनले हाम्रा इच्छापूर्ति गरी दिन्छिन् । मेरो प्रार्थना तिनले सुनिन् र नै आफ्ना जादुकाका औंलाले मेरा जरा स्पर्श गरेर मलाई एक ठूलो फूलमा परिणत गराई दिइन् ।'
यति भनेर त्यो ठुलो फूल एक छिन चुप रह्यो । अनि भने फेरि अभिमान र सफलता मिश्रित झिनो स्वरमा बोल्न थाल्यो, ' म, भलै थोरै समयको निम्ति किन नहोस्, एक भव्य शानदार फूलको रुपमा बाँचेको छु । थोरै समय नै सही, मेरो सत्ता सम्राट सरह कै रह्यो । मैले विश्वलाई गुलाबको दृष्टिले हेरें । मैले नभमण्डलको कानेखुसी गुलावको कानमा सुनेको छु । मैले प्रकाशका खातलाई गुलाबका पत्तामा राखेर सुनेको छु । के कसैले यस्तो सम्मान प्राप्त गर्न सकेको छ ?!'
यति भनेर उसले आफ्नो शिर झुकायो । अन्तिम सास लिँदै गर्दाको जस्तो घिटघिटो स्वरमा लरबराउँदै भन्यो, 'अब म चैनले मर्न सक्छु । किनभने मैले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेको छु । मैले आफ्नो ज्ञानलाई आफ्नो जनम जनमको संकीर्णताबाट बाहिर निकालेर विराट विश्वमा प्रस्तुत गरेको छु । जीवन अस्तित्वको यहीं हो रहस्य ।' अनि भने गुलाब काम्न थाल्यो । उसका पत्ता संकुचन हुन् थाले र उसले ओठमा स्वर्गीय मुस्कान हाल्दै जीवनको अन्तिम सास फेर्‍यो ।
Title Photo: https://akm-img-a-in.tosshub.com
Home Page Photo: https://cloudphoto.io
कविता : विचित्रको कानुन